December 4, 2020 - Achawlaymyar
ဘယ်တော့မှ ပြတ်စဲတော့မှာမဟုတ်တဲ့ အချစ်ရေးဆိုတာ
December 4, 2020 by Achawlaymyar
ဘယ်တော့မှ ပြတ်စဲတော့မှာမဟုတ်တဲ့ အချစ်ရေးဆိုတာ ချစ်သူတွေကြား လက်တွဲမြဲ၊ မမြဲဆိုတာ သူတို့နှစ်ယောက် ကြားထဲမှာရှိနေတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ သံယောဇဉ်တွေနဲ့ သက်ဆိုင်သလိုပဲ အချင်းချင်းပြုမူဆက်ဆံပုံတွေအရလည်း သက်ဆိုင်နေပါသေးတယ်။ ဒီတော့ စုံတွဲတစ်တွဲ တစ်သက်တာလုံးလက်တွဲမြဲဖို့ဆိုတာ ဒီအချက် (၆) ချက်တည်းနဲ့ စမ်းစစ်ကြည့်လို့ရနိုင်ပါတယ်။ (၁) ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရှိမှု တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မိသားစုဝင်တွေတောင်မသိနိုင်တဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်မျိုးတွေကို မျှဝေပြီးနှင့်နေပြီ၊ ဘယ်လိုကိစ္စမျိုးမဆို အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောဆိုတိုင်ပင်လို့ရတဲ့ အဖြစ်မျိုးဆိုရင်တော့ သင်တို့နှစ်ယောက်ဟာ သာမန်သမီးရည်းစားစုံတွဲတွေထက် တစ်ဆင့်မြင့်နေပါပြီ။ (၂) နှစ်ယောက်ကြားက ဆက်သွယ်မှု လက်တွဲမြဲဖို့ဆိုတာ ချစ်သူချင်း ချစ်နေဖို့တစ်ခုတည်းနဲ့ မသက်ဆိုင်တော့ပါဘူး။ နှစ်ယောက်ကြား communication လည်း ကောင်းရပါတယ်။ ဒါကို လွယ်လွယ်ပြောရရင်တော့ ရင်ဘတ်ချင်း၊ စိတ်ချင်း ဆက်နွယ်နေတာမျိုးပေါ့။ ကိုယ်ပြောတဲ့စကားတောင်မဆုံးသေးဘူး သူက နားလည်နေတာမျိုး၊ ကိုယ့်အကြိုက် … Read more
မိန်းကလေးတို့ သတိထားသင့်သော ယောင်္ကျားလေးများ၏ ထိုခဏ…
မိန်းကလေးတို့ သတိထားသင့်သော ယောင်္ကျားလေးများ၏ ထိုခဏ… ၁ ။ ခဏလေးပါကွာ…မကြောက်ပါနဲ့ တကယ်ကိုခဏလေးပါပဲ… ခပ်တုိုးတိုး နဲ့ လေသံကချွဲပစ်ပြီး ကြက်သီးထဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် သာမကရင်တွေ တစ်ဒိုင်းဒိုင်း ခုန် လာစေသော ထိုစကားသံ နှင့်အတူ တစ်ဆတ်ဆတ်တုန်ရီနေတဲ့ အပျိုစင်မလေး ရဲ့ ခန္ဒာပေါ်က စုန်ဆန်ချည် အလုပ်များနေတဲ့ လက်တစ်စုံ ပိုင်ရှင် ရဲ့ စကားလေး တစ်ခွန်းကညီမ တို့ ဘဝတစ်ခုလုံးကို စုတ်ပြတ်ကြေမွ သွားစေနုိုင်တယ် ဆိုတာ သတိထားစေ လိုပါတယ်။ တစ်သက်စာ ထိန်းသိမ်းလာခဲ့ရတဲ့ အပျိုစင် ဘဝ ဟာ ထို ပုရိသ ရဲ့ ခွင့်တောင်းလိုဟန်နှောပေမယ့်အမိန့် ပေးသံပျော့ပျော့ ရဲ့ ထုို ခဏ အောက်မှာ တစ်သက်စာ ကြေမွ ပျက်သုန်းသွား နုိုင်တယ်။ တစ်မိနစ် … Read more
ကိုကို တွေနဲ့ ချစ်မိရင်.…ဒီလို အချက်တွေနဲ့ အချစ်ခံရမှာပါ…….
ကိုကို တွေနဲ့ ချစ်မိရင်.…ဒီလို အချက်တွေနဲ့ အချစ်ခံရမှာပါ ကိုကိုတွေကို ချစ်မိရင် ပိုပြီး အချစ်ခံ ရတယ်။ ပိုပြီး ဆိုးလို့ ရသလို ကလေး တစ်ယောက်လိုလည်း ချွဲလို့ ရပါ တယ်။ ကိုကိုတွေက ဆုံးမ တတ်သလို လမ်းပြပေး တတ် ပါ တယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် မိန်းကလေး အများစုက ကိုကိုတွေကို ချစ်ကြ တာက များပါ တယ်။ ၁။ ကိုကို နဲ့ချစ်မိရင် ။ အရေးပေး ခံရ တယ်” ဘယ်ကိစ္စ မဆို သင့်ကို အရေးပေး တယ်။ သင့်ဆုံးဖြတ် ချက်ကို လည်း အရေးပေးပြီး ဦးစားပေးတယ်။ သူလုပ်ချင် တာထက် သင်လုပ် ချင်တာ၊ … Read more
မိန်းကလေးတစ်ယောက် ပွစိပွစိလုပ်နေသေးရင် တန်ဖိုးထားပါ…..
မိန်းကလေးတစ်ယောက်က မလိုအပ်ပဲနဲ့ စကားတွေ အများကြီးမပြောတတ်ဘူး အရေးမပါပဲနဲ့လဲ လေကုန်မခံတတ်ဘူး ဟိုလို မလုပ်နဲ့ ဒီလိုမလုပ်တားနေသေးတယ်ဆိုတာ စိတ်ပူနေသေးလို့ လို့သာ မှတ်ပါ ပြီးတော့ သ၀န်တိုတတ်တယ်ဆိုတာ မိန်းကလေးတိုင်းရဲ့ သဘာဝပါ ဒါစိတ်ပျက်စရာမှ မဟုတ်တာ သ၀န်တိုတယ်ဆိုတာ ဆုံးရှုံးရမှာကြောက်တဲ့စိတ် ခေါင်းစဉ်တွေ တပ်ချင်သလိုတပ်ပြီး နာမည်ဆိုးတွေ ထပ်ထပ်မပေးပါနဲ့ ကိုယ့်ချစ်သူကို ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း ပိုင်ချင်တဲ့ အတ္တတော့ ချစ်တတ်တဲ့ လူတိုင်းမှာ ရှိတတ်ပါတယ် တကယ်မချစ်ပဲနဲ့ ဘယ်သူက ဆုံးရှုံးရမှာ ကြောက်နေမှာလဲ မိန်းကလေးတစ်ယောက် သ၀န်တိုမှာ စိတ်ကောက်မှာ မကြောက်နဲ့ ပြီးတော့ ပွစိပွစိ လုပ်နေသေးရင် ဗြစ်တောက်ဗြစ်တောက် ပြောနေသေးရင် တန်ဖိုးထားပေးပါ မိန်းကလေးတစ်ယောက် သာမန်ထက်ပိုပြီး တိတ်ဆိတ်သွားတဲ့အခါ သာမန်ထက်ပိုပြီး အေးစက်သွားတတ်တယ် ဘာပဲလုပ်လုပ် စိတ်မ၀င်စားတော့ဘူး ကောင်းသည်ဖြစ်စေ … Read more
သူကြောင့် ဒီလိုတွေခံစားနေရပြီဆိုရင်တော့ သူ့ကို သင်အရူးအမူးစွဲလန်းနေမိပါပြီ……
သူကြောင့် ဒီလိုတွေခံစားနေရပြီဆိုရင်တော့ သူ့ကို သင်အရူးအမူးစွဲလန်းနေမိပါပြီ လူတစ်ယောက်ကို စွဲလန်းမိသွားရင် အရမ်းကို ခံစားရပါတယ်။ ချစ်တဲ့အဆင့်က သိပ်ပြီး မခံစားရပေမယ့် စွဲလန်းတဲ့ အဆင့်ကိုရောက်သွားရင် အရမ်းကို ခံစားရခက်ခဲလှပါတယ်။ တကယ်လို့ လူတစ်ယောက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒီလိုတွေ ခံစားနေရရင် သူ့ကိုသင် အကြီးအကျယ်စွဲလန်းမိနေတာ သေချာပါတယ်။ (၁) မိ်ုးလင်းမိုးချုပ်သူ့အကြောင်းပဲတွေး မျက်စိနှစ်လုံးပွင့်တာနဲ့ သူ့အကြောင်း၊ အိပ်ခါနီးလည်း သူ့အကြောင်းတွေးတွေးပြီး အိပ်သွားတာမျိုးပါ။ ဒီခံစားချက်ဟာ တစ်ခါတလေကိုယ့်ကို ပျော်စေသလို ကိုယ့်ကိုနာကျင်စေပါတယ်။ တစ်နေကုန်လည်း သူ့အကြောင်းကလွဲပြီးဘာမှကို မတွေးချင်၊ မလုပ်ချင်ပဲ တစ်ခါတလေ တငိုင်ငိုင် ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ (၂) ခြေရာခံမယ် သူ့ရဲ့ ရှိသမျှ ဆက်သွယ်လို့ရမယ့်၊ ခြေရာခံလို့ရမယ့် နေရာတိုင်းကနေ သူ့ကို ခြေရာခံမိဖို့ကြိုးစားနေမိမှာပါ။ သူဘာလုပ်တယ်၊ ဘယ်သွားတယ်၊ ဘယ်သူနဲ့လဲ ဆိုတာတွေအားလုံးကို သင်သိချင်နေသလို … Read more
မျက်နှာများတဲ့ ယောက်ျားတွေမှာ တွေ့ရတတ်တဲ့ အမူအကျင့်များ…..
မျက်နှာများတဲ့ ယောက်ျားတွေမှာ တွေ့ရတတ်တဲ့ အမူအကျင့်များ မိန်းကလေးအများစုက သူတို့ရဲ့ အချစ်ကို တစ်ယောက်ဆိုတစ်ယောက် ပုံအောချစ်တတ်ကြပေမယ့် တစ်ချို့သောယောက်ျားလေးတွေကတော့ အချစ်တွေဝေမျှရတာကို ကြိုက်နှစ်သက်တတ်သူတွေပါ … သူတို့တွေရဲ့ အချစ်ဟာ အရမ်းကို များပြားလွန်းပြီး တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းနဲ့ မကျေနပ်နိုင်ပဲ တစ်ခြား သူတွေကိုပါ ဝေမျှတတ်တဲ့ မျက်နှာများသူတွေ ဖြစ်ကြပါတယ် …။ မျက်နှာများတဲ့ သူဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကို သူတို့ရဲ့ရုပ်ရည်ကို ကြည့်ရုံနဲ့ မသိနိုင်ပေမယ့်လို့ သူတို့ရဲ့ အမူအကျင့်တွေကတစ်ဆင့် သိနိုင်ပါတယ်။ မျက်နှာများတဲ့ ယောက်ျားတွေမှာ ဒီလို အမူအကျင့်တွေ ရှိလို့နေပါတယ် …။ (၁) အပြောကောင်းတယ် အပြောကောင်းတိုင်းတော့ မျက်နှာများတယ်လို့ ပြောလို့မရပေမယ့် မျက်နှာများတဲ့သူတိုင်းကတော့ အပြောကောင်းကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ပစ်မှတ်ကိုချိန်ရွယ်ဖို့ အပြောချိုချိုလေးတွေနဲ့ ပထမဆုံး စတင်တတ်ကြပါတယ် …။ မိန်းကလေးတွေက အပြောကောင်းတဲ့လူတွေကို သဘောကျတတ်ကြတာကို … Read more
အရပ်ပုလို့ အားငယ်စရာ မလုိုပါဘူး။ အရပ်ပုတဲ့ ကောင်မလေးတွေမှာလည်း သူ့အားသာချက်နဲ့သူရှိ တတ်ကြပါတယ်။ အရပ်ပုတဲ့ ကောင်မလေးတွေရဲ့ အားသာချက်(၆)ချက်ကိုအောက်မှာ ဖော်ပြပေး လိုက်ပါတယ်။ 1. အဝတ်အစားမရှားခြင်း အရပ်ပုတော့ အဝတ်အစား မရှားပါဘူး။ဒါကြောင့် ဈေးဝယ်ထွက်တဲ့ အခါမျိုးမှာ တော်ရုံကလေးအင်္ကျီကို ကောက်စွပ်ပြီး ၀တ်သွားလို့ရပါတယ်။ ဆိုင်မှာ သွားဝယ်ရင်လည်း အာရှမှာ နေပြီး အရပ်ပုတာ မဆန်းတဲ့အတွက် အင်္ကျီဆိုဒ်တွေက အဆင်သင့်ရှိပါတယ်။ 2. ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါတိုင်း ရှေ့ဆုံးမှာ နေရခြင်းဒါကတော့ ရှင်းပါတယ်။ အရပ်ပုတဲ့သူတွေဟာ ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာ ရှေ့ဆုံးကနေ နေဖို့ ဦးစားပေးခံရပါတယ်၊။ ဓာတ်ပုံထဲမှာ ရှေ့ဆုံးကထင်းကနဲ ဖြစ်နေတာပေါ့။ 3. တစ်ခုခုနဲ့ဆောင့်မိလို့နဖူးသီးတာမျိုးမရှိပါဘူး။ အရပ်ပုတော့ ဘာဖြစ်သလဲ။ သေချာတာကတော့ အပေါ်က တန်းတွေ၊ ဘားတွေနဲ့ ခေါင်းကို မတိုက်မိတော့ဘူးပေါ့။ 4. နေရာအကျယ်အများကြီးမလိုခြင်း … Read more
ဒီဟာတှလေုပျမိရငျ တဈလကနေ ၃လအထိ ငှမေဝငျဘဲ လာဘျပိတျစတေတျပါတယျ……
(၁)အိပျယာနောကျကမြှထခွငျး မပွုလုပျပါနဲ့ (၂)မနကျပိုငျးကို ရနျဖွဈတာ စကားမြားတာတှမေလုပျပါနဲ့ (၃)အိပျယာထထခငျြး မကျြနှာအရငျတနျးသဈပါ အစားအရငျစားတာ အိမျသာတနျးတကျတာ မလုပျပါနဲ့ (၄)ဘုရားအရငျရှိခိုးပွီးမှ အလုပျကိုစလုပျပါ (၅)ပိုကျဆံတှကေို ပွနျ့နအေောငျထားတာမြိုး လိပျထားတာတို့ ပဈစလခကျမထားပါနဲ့ (၆)စိတျထားကောငျးကောငျးထားပါ သူမြားကို အတငျးပွောတာ ပုတျခပျတာမြိုးမလုပျမိပါစနေဲ့ (၇)အနောကျအရပျ မွောကျအရပျတှကေို ခေါငျးပေးပွီးမအိပျမိပါစနေဲ့ (၈)ဖိနပျအဟောငျးတှေ ထီးအပကျြတှေ နာရီအပကျြတှေ အိမျမှာမထားပါနဲ့ (၉)ပိုကျဆံပျေါမှာ ဘောပငျနဲ့ ဟိုခွဈဒီခွဈ မရေးပါနဲ့ (၁၀)ခငျပှနျးကွီး (၁၀)ပါးကိုလုံးဝ မပဈမှားမိပါ​စနေဲ့ မစျောကားမိပါ​စ်ေနှင့် (၁၁)တဈပတျကိုတဈရကျတော့ အသားငါးမစားပါနဲ့ သကျသကျလှတျစားပါ (၁၂)အိပျယာထထခငျြး ဖုနျးသုံးတာ ဖုနျးပွောတာတှမေလုပျပါနဲ့ မကျြနှာအရငျသဈပါ (၁၃)မနကျပိုငျး ဘယျသူကိုမှငှမေ​ခြေးပါနဲ့ (၁၄)မနကျပိုငျး အရကျသောကျတာ မလုပျရပါ (၁၅)ငှတှေကေို ဖိနပျနဲ့ထိတာ ထမိနျနဲ့ထိတာမြိုးမလုပျမိပါစနေဲ့ ဒီအရာတှကေို လုပျမိရငျ ငှမေဝငျတာ လာဘျပိတျတာတှဖွေဈတတျပါတယျ ဗဒေငျ … Read more